Archive du 20170814
Marc Ravalomanana “Atahorana hiverina ny krizy”
Tsy navelan’ny fitondram-panjakana hankalaza ny faha-15 taonany indray tamin’ny alalan’ny prefen’i Toamasina Benandrasana Cyrille ny antoko Tiako I Madagasikara ny sabotsy teo.
Jeunes Leaders Malagasy Misy ny lonilony politika hatramin’ny taona 2014
Efa misandrahaka manerana ny nosy ny JLM (Jeunes Leaders Malagasy) ahitana mpikambana tanora latsaky ny 45 taona izay manome lanja betsaka ny fanadihadiana politika eto amin’ny firenena.
Fampihavanana ara-drazana Hotanterahina ao Nosy varika
Fari-piainan’ny malagasy Mitotongana isan-taona
Nitotongana noho ny tamin’ny 57 taona lasa ny fiainan’ny malagasy ankehitriny, hoy ny mpanao politika, ny Jeneraly Désiré Ramakavelo,
Andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora Tontosa tao Fianarantsoa
Notanterahina tao amin’ny renivohitra Fianarantsoa ny 10 hatramin’ny 12 aogositra 2017 ny andro iarasam-pirenena ho an’ny tanora, ka lohahevitra nosafidiana tamin’izany ny hoe
Alain Ramaroson Hampiakatra fitsarana ambony
Tsy afa-po tamin’ny didim-pitsarana nivoaka ny 8 aogositra teo, izay manameloka azy higadra 30 volana sy mandoa onitra 200 tapitrisa noho ny raharahan-tany teny Ambohimangakely nifanolanany tamin’ny fianakaviana i Alain Ramaroson.
Delestazy lavareny Nitroatra ny mponin’Ambohidahy Itaosy
Taorian’ireo mponina eny Anosimasina Itaosy dia tezitra mafy tamin’ny orinasa JIRAMA ihany koa ireo mponina tao amin’ny Fokontany Ambohidahy Itaosy,
Asa fanaovan-gazety Nodimandry i Andry Ratovo
Nindaosin’ny fahafatesana ny sabotsy maraina teo tamin’ny 2 ora, rehefa nolazoin’ny aretin’ny voa nandritra ny 12 volana ny namana mpanao gazety Andriamaro Ratovonjanahary,
Mamboly korontana !
Tsy mety tapitra ny fandranitana sy fihantsiana ady. Efa efa miditra amin’ny aty vilanin’ny hafa mihitsy ny fanjakana HVM amin’ny filam-boatsiary sy famoretana,
Andoharanofotsy Hametrahana pôlisy kaominaly amin’izay
Miroso hatrany amin’ny fampandrosoana ny faritra iadidiany amin’izao fotoana izao ny kaominina Andoharanofotsy, tarihin’ny Ben’ny tanàna Ranirison Hasina.
CRM PARAMED Hanatsara ny sehatry ny fanofana paramedikaly
Vonona hanatsara ny sehatry ny fanofanana paramedikaly eto amintsika ny CMR Paramed na ny drafitra fanofanana paramedikaly tarihin’ny filoha nasionaliny Razanadrakoto Roland Albert.
Tena ilaina amin’ny fampandrosoana ny ho avin’i Madagasikara ny fanisam-bahoaka, hoy ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny sampanasan’ny Firenena mikambana misahana ny mponina.